Ahụ nwamba m ọ na -arịa ọrịa? - Kedu ihe ịrịba ama iji chọpụta ya? | Bezzia
Anyị na -ekwu mgbe niile na anụ ụlọ anaghị ekwu okwu na anyị ziri ezi. N'ihi na mgbakwunye na ụlọ ọrụ ha na -enye anyị yana nzaghachi ha na mkpali, ọ dị ka anyị maara ha nke ọma. N'ezie enwere isiokwu anyị na -atụ uche mgbe niile: Kedu ka m ga -esi mata ma ọ bụrụ na nwamba m na -arịa ọrịa?
Mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ akara doro anya mana nke a anaghị adịkarị. Yabụ na anyị ga -echegbu onwe anyị karịa ka ọ dị mkpa. Yabụ, taa, anyị ga -ahapụrụ gị ụfọdụ ntụpọ nke ị ga -eji malite chee na ihe na -eme Dị ka nke a, ọ dị gị mkpa ịga hụ nwanyị ahụ ozugbo enwere ike iji wepu obi abụọ gị kpamkpam.
1 Mgbanwe n’agụụ agụụ gị
2 Mgbanwe na ụkpụrụ omume gị
3 Na -ehi ụra karịa ka ọ na -adị
4 Ntutu isi gị enweghị otu ncha
5 Goms na -acha ọcha karịa pink
6 Ike ọgwụgwụ mberede nwere ike igosi na nwamba m na -arịa ọrịa
Mgbanwe n’agụụ agụụ gị
Ọ bụ otu n'ime ihe mgbaàmà kacha doo anya na ihe na -eme. Anyị ekwesịghị ibikwasị aka anyị n'isi, n'ihi na ikekwe ọ bụ naanị ihe nwa oge, mana ọ bụ eziokwu na ọ bụ nnwale doro anya. Yabụ, ọ bụrụ na anyị ahụ ka ọ na -ebelata ma na -eso ya na -eso ya, anyị enweghị ihe ọzọ ikwu. N'ezie, n'oge ndị ọzọ, a na -enye mgbanwe rie karịa ka ọ dị na mbụ na anyị nwekwara ike na -ekwu maka ọrịa eriri afọ ma ọ bụ ọbụna ọrịa shuga.
Mgbanwe na ụkpụrụ omume gị
Dị ka ị maara nke ọma, nwamba bụ anụ nwere anụ. Ha nwere usoro ha na -eme, ọ na -esiri ha ike ịgbanwe ha. Yabụ, mgbe ị chọpụtara na nke a na -eme na ha anaghị aga n'ihu n'ihe ha na -eme, mgbe ahụ ọ bụ oge ịjụ ma nwamba m na -arịa ọrịa. Dịka ọmụmaatụ, ha dị oke ọcha mana ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ naghị asachapụ dị ka ọ dị na mbụ ma ọ bụ ikekwe, ọ na -aga oke nke ọzọ na nhicha ya karịrị akarị, ọ ga -enyela anyị ntụzi aka na ihe na -eme.
Na -ehi ụra karịa ka ọ na -adị
Ikekwe n'oge a ọ siri ike ịmata ma nwamba m na -arịa ọrịa, n'ihi na ha na -ehi ụra, ha na -ehi ụra ọtụtụ awa. Mana ọ bụrụ na ị chọpụta na ọ ka na -etinye oge karịa ka ọ na -emebu na -emechi anya ya, ọ bụrụ na ị chọpụtakwa na ọ na -agbalị izo ma ọ bụ na ọ tetara n'ụra enweghị ihe ọ bụla, ihe na -eme. Ọzọ anyị na -ekwu maka mgbanwe n'omume ya, mgbanwe. Ya mere, ọ ga -abụ ihe amamihe dị na ya itinye onwe gị n'aka ndị ọkachamara ka ịkpọtụrụ ya.
Ntutu isi gị enweghị otu ncha
Ọ na -amasị anyị ịhụ ka ntutu isi ya na -esi na -enwu enwu. Maka na ya na ahụike na ịma mma. Mana mgbe ụfọdụ ọ naghị adị otu a, anyị na -ahụkwa akụkụ nke ọzọ. Nke ahụ bụ, anyị ga -achọpụta na ihie ahụ furu efu na mgbakwunye na mgbe ụfọdụ anyị ga -achọpụta na ọ na -agbagwoju anya. Yabụ, ebe ahụ ka anyị ga -amalite chee na ihe na -eme. N'otu aka ahụ, Ee, ọ nwere ike ibute ọrịa ụfọdụ, mana maka onye ọzọ ọ nwere ike ịbụ n'ihi nri. Nke ahụ bụ, anụmanụ chọrọ ụkpụrụ nri nke ọ naghị eme.
Goms na -acha ọcha karịa pink
Ọ bụ eziokwu na goms na -adịkarị ka ọ na -acha pinki pinki, nke na -arụtụ aka na ọnọdụ ahụike siri ike. Mana mgbe ụfọdụ anyị nwere ike ịhụ na agba ọcha na -apụta na ha. Yabụ, ọ bụ ihe ịrịba ama ndị ọzọ doro anya na enwere ọrịa metụtara nwamba anyị. Otu n'ime ha bụ anaemia, mana ọ bụ eziokwu na enwere ike inwe ihe ndị ọzọ dị iche iche. Ọ bụrụ na ọ bụ anaemia, ọ ga -ejikọkwa adịghị ike ma ọ bụ ike ọgwụgwụ yana mgbakwunye akpịrị ịkpọ nkụ na oke ibu. Ya mere, iji wepụ obi abụọ ọ bụ ihe amamihe dị na ya mgbe niile ị gakwuru onye na -ahụ maka ọgwụgwọ anụmanụ.
Ike ọgwụgwụ mberede nwere ike igosi na nwamba m na -arịa ọrịa
Ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ịdịtụ umengwụ. Mana a bịa n'ịkụ egwu, ha na -enyekwa ya ihe niile. N'ihi ya ọ bụrụ n'ịhụta mgbanwe siri ike, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mberede mgbanwe, ọ pụrụ ịbụ na ọ na -eme ka anyị mara ihe kpatara ya. Ọ bụrụ na ọ chọghị igwu egwu, ọ bụrụ na ọ nweghị ndepụta, ọ nwere ike nwee ụdị nsogbu iku ume. Agbanyeghị na anyị enweghị ike ilekwasị anya n'otu akara ma ọ bụ n'otu nkwubi okwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Mascotas » Kedu ka m ga -esi mata ma ọ bụrụ na nwamba m na -arịa ọrịa?